स्मार्ट एनआरएनए बनाउँछु—भवन भट्ट,अध्यक्षी,गैर आवासीय नेपाली संघ – Maitri News
स्मार्ट एनआरएनए बनाउँछु—भवन भट्ट,अध्यक्षी,गैर आवासीय नेपाली संघ
maitrinews October 18, 2017
एनआरएनएको आठौं विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन हालै काठमाडौ.मा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले अध्यक्षमा भवन भट्टलाईै निर्वाचित गरेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टसँग एनआरएनएको भावी कार्ययोजनाका बारेमा गरिएको कुराकानीको संक्षेप :
एनआरएनएको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । अव संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघको शाखलाई थप उचाइमा पु¥याउने मेरो प्रमूख उद्धेश्य छ । यसअघि धेरैपटक संघमा बसेर काम गरेको अनुभवका आधारमा म अव संस्थालाई अगाडि बढाउँछु । यो स्वाभाविक प्रक्रियामा यसपटक धेरै साथीको चाहना म नै अघि जानुपर्छ भन्ने रहेकाले नै हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । संघमा अहिले पालोका आधारमा पनि अध्यक्षका लागि म नै अग्रपंक्तिमा थिएँ । विश्वभरिका साथीले सबैभन्दा स्वाभाविक तपाईं नै हो भनेपछि म अघि बढेको हो । म एनसीसीबाट माथि उठेर यहाँ आइपुगेको व्यक्ति हुँ । त्यसैले म नेतृत्वमा आएकोले एनसीसी र आईसीसीबीच निकटता अझ बढ्नेछ । एनसीसीका समस्या मैले राम्रोसँग बुझेको छु । अहिलेको नेतृत्वले थालेका लाप्राक नमुना बस्ती, आफ्नै भवन निर्माण, शंखमूल पार्क निर्माणसहितका काम पूरा भएका छैनन् । तिनलाई सम्पन्न गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघलाई गतिशील नेतृत्व दिन मेरो उम्मेदवारी हो । यस विषयमा म छिट्टै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नेछु ।
तपाइँको पहिलो काम के हुन्छ ?
मैले एनआरएनउमा यसअघि घोषणा भउका कामहरुलाई अगाडि बढाउने छु । यसकालागि मैले वैको सल्लाह र सहयोग लिएको कमगर्ने योजना वनाएको छ । म एनआरएनउ अभियानलाई अगाडि बढाउरै छाड्ने छु ।
तपाईंको जितको आधार के रह्यो ?
सम्पूर्ण साथीभाइको माया, स्नेहबाट र मेरो काम गर्ने शैलीबाट नै हो भन्ने मैले ठानेको छु । यसमा मेरो सरल बुझाइ छ । अहिलेसम्म एनआरएनएमा मैले जति योगदान गरें, त्यो सबै साथीलाई जानकारी भएकै कुरा हो । संसारमा मलाई मन नपर्ने मान्छे छैन र मलाई मन नपर्ने खाना पनि छैन । एनआरएनएभित्र मेरो सबै पक्षसँग राम्रो छ । त्यही भएरै होला, सबै साथीले मलाई छान्नु भन्नुभयो । मैले सबैलाई राम्रो गरेको छु र संस्थामा पनि राम्रो गरेको छु । यो पृष्ठभूमिका कारण मलाई साथीहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ ।
एनआरएनएको संरचनागत परिवर्तनका लागि अहिले आवाज उठेको भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड प्रस्तावमा एनआरएनए विभाजित देखिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
संस्थाको नेतृत्वले भविष्य सम्झेर भिजन गर्नु राम्रो हो, संस्थाको गतिशीलताका लागि भिजन आउनुपर्छ । भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड प्रस्ताव आफैंमा विवादित होइन । त्यसभित्र भएका अन्तर्वस्तु र ल्याउने प्रक्रियालाई लिएर साथीहरूले विरोध जनाउनुभएको हो । एउटा गतिशील संस्थामा यो ठूलो कुरा होइन । प्रस्तावमाथि दफावार रूपमा छलफल भएर जाँदा सबै कुरा सुल्झिन्छन् जस्तो लाग्छ । फेरि यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा फ्लोरले त्यसलाई पारित, अस्वीकृत वा फेरबदल गर्न सकिहाल्छ । यसलाई म सकेसम्म निरन्तरता दिएरै अघि बढ्नेछु ।
वैदेशिक रोजगारीको समस्या समाधान गर्नेतर्फ तपाईंको भावी योजना के छ त ?
वैदेशिक रोजगारीको दिगो समाधान खोजिनुपर्छ । निश्चय नै मैले आफू अध्यक्षको उम्मेदवार हुने भनेर सोचेदेखि नै वैदेशिक रोजगारीका समस्या पहिचान र तिनको दिगो रूपमा निराकरणबारे कार्ययोजना बनाइरहेको छु । निचोडमा भन्नुपर्दा के देखियो भने यसलाई रोकथाम र दिगो समाधानका लागि इन्स्योरेन्स नीति एउटा हुन सक्छ भन्ने देखियो । अहिले पनि सरकारले इन्स्योरेन्स गर्छ तर मैले भन्न खोजेको अलिक फरक कुरा हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरू एनआरएनएसँग आबद्ध हुने र उहाँहरूको इन्स्योरेन्स बल्कमै गर्दिने । यसो भयो भने १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रिमियिमलाई एक डेढ सयमै आउँदो रहेछ । त्यसको जिम्मेवारी एनआरएनए सेक्रेटरिएटले लिएर कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मेरो सोच हो । उहाँहरूलाई समस्या पर्नासाथ एनआरएनएमा निवेदन दिनुभयो भने उहाँहरूको इन्स्योरेन्स रकम प्राप्ति प्रक्रिया पनि हामी नै अघि बढाइदिन्छौं भन्ने हो ।
Previous Previous post: चुनाव रोक्ने संकेतपछि सरकारबाट बाहिरिने माओवादी निर्णय स्थगित
Next Next post: उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गर्दै बाम गठबन्धन,घनिभूत छलफलमा